सभामुखद्धारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, प्रधानमन्त्रीलाई पनि निमन्त्रणा ! « Mayadevi Online News Portal
सभामुखद्धारा सर्वदलीय बैठक आह्वान, प्रधानमन्त्रीलाई पनि निमन्त्रणा !
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७८ शुक्रबार ०७:५१
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । दिउँसो २ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अरू दलका नेताहरूसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको हो ।
सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबैलाई लिखित निमन्त्रणा पठाउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनको घोषणा भएपछि सभामुख सापकोटाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री र सबै दलका प्रमुखहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुखका केही विशेषाधिकार प्रयोग हुन सक्ने अनुमान भइरहेका बेला उहाँले पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गर्नुलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
बुवाको दाहसंस्कार गरेर फर्किँदा बाटोमै छोराको पनि मृत्यु
डडेल्धुरा ।डडेल्धुराको आलिताल–५ भावरमा बस्दै आएका ७५ वर्षीय भक्तबहादुर रोकाको